DU Antivirus လုံခြုံမှုကိုသတိပြုပါ။ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဒေတာခိုးယူခဲ့သည် | Androidsis
DU Antivirus လုံခြုံရေးကိုသတိပြုပါ။ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲအသုံးပြုသူအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းပါ
မိုဘိုင်းခြိမ်းခြောက်မှုအဖွဲ့မှမကြာသေးမီကကျွန်တော်တို့ကိုစိုးရိမ်ဖွယ်ရာသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုရရှိခဲ့သည် Check Point ဆော့ဝဲလ်နည်းပညာများလီမိတက်(NASDAQ:CHKP)လုံခြုံရေးကိုအထူးပြုသည့် Android တွင်အသုံးပြုသူများသတိပေးထားသော Android အတွက်ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးဆော့ဖ်ဝဲလ်၏အမည်ကိုတုံ့ပြန်သည့် antivirus application တစ်ခု DU Antivirus လုံခြုံရေးဂူဂဲလ်ပလေးစတိုးတွင်ရှိနေဆဲဖြစ်သောကြောင့် ထိုအချိန်မှစ၍ ၄ င်းတို့၏ဆိပ်ကမ်းများတွင်တပ်ဆင်ထားသောသုံးစွဲသူများ၏ privacy ကိုချိုးဖောက်နေဆဲဖြစ်သည် ကြိုတင်အသိပေးခြင်းမရှိဘဲသူတို့ထံမှပုဂ္ဂလိကသတင်းအချက်အလက်များကိုစုဆောင်း.
ဒါကြောင့် သင်ဤအသုံးမကျ application ကို၏အသုံးပြုသူတစ် ဦး လျှင် သင် Android ကို install လုပ်ပြီးသားပါ။ ၎င်းကိုဖယ်ထုတ်ရန်သင်အကြံပြုပါသည် ဒီကနေကျွန်တော်တို့ Androidsis ကိုပြောခဲ့သလို Android လောကမှာအထူးပြုထားတဲ့ဘယ်စာမျက်နှာမှမဆိုဆားကိုတန်ဖိုးရှိစွာအသုံးပြုခဲ့ပြီးပြီ Android အတွက်အကောင်းဆုံး antivirus သည်သာမန်အသိဖြစ်သည်,
ကံမကောင်းစွာတစ်ဖန်ကျနော်တို့တစ် ဦး ၏သတင်းပေးရန်ရှိသည် Play Store သို့လှည့်စားသောရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်သို့မဟုတ်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ခိုးယူသည့် applicationDU Security LAb ကဲ့သို့သောကုမ္ပဏီမှလျှောက်လွှာမှကျွန်ုပ်သည်အလားတူအဖြစ်အပျက်အတွက်ရှေ့ပြေးအဖြစ်အပျက်တစ်ခုကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျမမှတ်မိပါ။
အမှုအရာ Check Point သတင်းပို့သည်နှင့်အညီ, လျှောက်လွှာသောကွောငျ့ဖွစျသညျ DU Antivirus လုံခြုံရေး DU Llamada (သို့မဟုတ်) DU ကုမ္ပဏီမှဒုတိယအကြိမ်လျှောက်ထားခြင်းနှင့် တွဲဖက်၍ ဆောင်ရွက်နိုင်သည် "Caller ID & Call Block - DU ခေါ်ဆိုသူ" ။
Du Antivirus Security ရဲ့ Check Point မှလာတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုအမြဲတမ်းအခြေခံပြီးပြုမူတာပါပဲ ဆက်သွယ်မှုစာရင်း၊ ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းမှတ်တမ်းများနှင့်တည်နေရာစသည့်ဒေတာများကိုရယူခြင်းအားဖြင့်၎င်းလျှောက်လွှာသည်၎င်း၏ပထမဆုံးလုပ်ဆောင်မှုတွင်လုပ်ဆောင်လိမ့်မည်။
ထို့နောက်၎င်းအချက်အလက်များကို encode လုပ်၍ ဒုတိယ application ဖြစ်သော "Caller ID & Call Block - DU Caller" ခေါ်သည့်ဝေးလံခေါင်သီသော server သို့ပို့လိမ့်မည်။ သန်းပေါင်းများစွာသော Android ထုတ်ကုန်များမှခိုးယူထားသောဤပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များကို၎င်းတို့အကျိုးစီးပွားနှင့်အကျိုးအမြတ်အတွက်အသုံးပြုရန်ရရှိလိမ့်မည်.
Google Play Store ရှိ DU Antivirus Security ကိုသင်တွေ့ပြီဆိုရင်မကြောက်ပါနဲ့ တရားဝင် Android အက်ပလီကေးရှင်းစတိုးတွင်ယခုဗားရှင်းသည်ဤအန္တရာယ်ရှိသည့်ကုဒ်၊ သုံးစွဲသူပေါင်း ၈၄ သန်းခန့်ကိုထိခိုက်နိုင်သည့် Play Store တွင် application ၂၄ ခုတွင်စုစုပေါင်းတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သြဂုတ်လကုန်ကတည်းက Play Store မှဆုတ်ခွာထားပြီးဖြစ်သောလျှောက်လွှာအချို့။
ဒီကနေ Androidsis ကဒီ Android app အတွက် antivirus လို့ခေါ်တဲ့ဒီ application တွေကိုအမြဲတမ်းအသုံးပြုဖို့ငါအကြံပြုပါတယ်။ Android အတွက်အကောင်းဆုံးဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးဟာသင်ကိုယ်တိုင်ရဲ့သာမာန်အသိပဲ.
ဤဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေး application များအပြင်၎င်းတို့အားလုံးသို့မဟုတ်အနည်းဆုံးအများစုသည်တကယ့်လိမ်လည်မှုဖြစ်သည် "Booby ထောင်ချောက်" Que သူတို့လုပ်သမျှအားလုံးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ Android terminal ၏အဖိုးတန်အရင်းအမြစ်များကိုစားသုံးရန်ဖြစ်သည်သို့မဟုတ်ဤအရေးအကြီးဆုံးနှင့်အရေးအပါဆုံးကိစ္စ၌ရှိသကဲ့သို့ အမြင့်ဆုံးလေလံမှရောင်းဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဒေတာခိုးယူ.
ဤနေရာတွင်ကလစ်နှိပ်ခြင်းအားဖြင့်တရားဝင် Check Point ဘလော့ဂ်ပေါ်တွင်ပိုမိုသောအချက်အလက်များ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » လဲ tutorial » လုံခွုံရေး » DU Antivirus လုံခြုံရေးကိုသတိပြုပါ။ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲအသုံးပြုသူအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းပါ
သင်၏မိုဘိုင်းသည် Blueborne အားထိခိုက်လွယ်မှုရှိမရှိမည်သို့သိနိုင်သနည်း